မြန်မာသမ္မတ နဲ့ ဒေါ်စုကို သမ္မတ အိုဘားမား ဆက်သွယ် စကားပြော | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အာဏာယစ်ပလ္လင်အတွက် အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်ဝါဒီတွေနဲ့ ပူဇော်ရမှာဖြစ်လို့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေကို တွင်တွင်ကြီး ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဥပဒေအထက်မှာ အောင်ဇေယျတု ဂျာနယ် ရှိနေပြီလား? »
M-Media VOA(မြန်မာပိုင်း) မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ဒီကနေ့ ကျင်းပမယ့် အစည်းအဝေးဟာ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ အကြား ပထမဆုံး အကြိမ် တွေ့ဆုံမှုလည်း ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
This entry was posted on October 31, 2014 at 7:56 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.